धुलिखेलमा निधन भएकी महिलाको घर र माइती गाउँ सिल, अब ती वडाबाट कोही व्यक्ति बाहिर आउन र वडाभित्र प्रवेश गर्न नपाउने ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/धुलिखेलमा निधन भएकी महिलाको घर र माइती गाउँ सिल, अब ती वडाबाट कोही व्यक्ति बाहिर आउन र वडाभित्र प्रवेश गर्न नपाउने !
धुलिखेलमा निधन भएकी महिलाको घर र माइती गाउँ सिल, अब ती वडाबाट कोही व्यक्ति बाहिर आउन र वडाभित्र प्रवेश गर्न नपाउने !
काठमाण्डौस्थिति शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भई घर फर्किएकी सिन्धुपाल्चोककी एक २९ वर्षीया महिलाको के कारणले निधन भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।
वैशाख २३ गते अस्पताल भर्ना भएकी उनले भोलिपल्ट बच्चा जन्माएको र वैशाख २५ गरे घर फर्किएकी थिइन्। “घरमा गइसकेपछि ज्वरो श्वासप्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँले स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनुभएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ,” देवकोटाले भने।
“स्थिति जटिल बन्दै जाँदा थप उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल आउँदै गर्दा उहाँको निधन भएको खबर हामीले पाएका छौँ। यस सम्बन्धमा हामीले विस्तृत विवरण लिइरहेका छौँ र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्। उनका अनुसार ती परीक्षण र अन्य विवरण प्राप्त भइसकेपछि मात्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कोभिड-१९ सँगको सम्बन्धित निधन हो वा हैन भनेर निर्क्योल गरेर बताउनेछ।
यसै क्रममा सुत्केरी भाइरसको कोरोनाले निधन भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले धुलिखेल अस्पतालसँग छलफल गरेको छ। बिहीबार राति करिब १० बजे निधन भएकी महिलाकोबारे डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा डा. दिपेन रमण सिंहसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोली धुलिखेल अस्पताल पुगेको हो। उनीहहरु छलफल गरेको फर्किएका छन्।
निधन भएको खबर लगतै महिलाको गाउँ र माइती गाउँलाई सिल गरिएको छ । उनको गाउँ बाह्रबिसे नगरपालिका – ९ राम्चे हो भने माइती गाउँ बलेफी गाउँपालिका हो । बलेफीको ७ र ८ वडालाई सिल गरिएको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले पुष्टि गरेका छन् । अब ती वडाबाट कोही व्यक्ति बाहिर आउन र वडाभित्र प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।
जिल्ला कोभिड १९ विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । महिला गर्भजाँच गराएको र सुत्केरी पछि पनि स्वास्थ्य जाँच गराएको बाह्रबिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि सिल गरिएको छ । १० दिन अघि शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएर घर गएकी महिलामा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि धुलिखेल अस्पताल लगिएको थियो । उनलाई स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएको र ज्वरो पनि आएको अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । कोरोनाको लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले उनको स्वाव संकलन गरेर कोरोना परिक्षण गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आएको हो । उनको उपचारमा संलग्न ३ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यगर्न के गर्नपर्छ सुझाव दिनुस भन्दा अझै १० बर्ष सकिँदैन भन्ने सचिवलाइ प्रधानमन्त्रीको जवाफ -“प्राधिकरण विघटन गरेर तपाइँ पनि राजिनामा दिएर घर जानुस”